RASMI: Kooxda Chelsea Oo Heshiis Lacag Waaliya Ay Ku Heli Doonto La Gashay Shirkadda Nike
HomeWararka MaantaRASMI: Kooxda Chelsea Oo Heshiis Lacag Waaliya Ay Ku Heli Doonto La Gashay Shirkadda Nike
13/10/2016 Samatar Mohamed
Kooxda Chelsea ayaa Maanta ku dhawaaqday inay heshiis la gaaleen shirkadda agabka Sports sameysa ee Nike, Blues ayaana shaaciyay inuu yahay heshiiskii ugu weynaa ee ay abid ay gashay.
Kooxda Chelsea ayaa la rumeysan yahay inay shirkadda Nike ay la gashay heshiis ku kacaya 60 million ginni sannadkii oo shirkadda ay ku sameyn doonto garamaanta kooxda, taas oo Blues ka caawin doonta inay kooxaha waa weyn kula tartamaan suuqa iibsiga.
Heshiiska cusub ee ay Chelsea ku dhawaaqday Maanta inay la gashay shirkadda Nike ayaa ah laba jibaarka lacagtii ay ka qaadan jireen shirkadda Adidas oo Blues siin jirtay sannadkii 30 million oo ginni.
Sida Chelsea ayaa xaqiijisay shirkadda Nike ayaa garamaanta u sameyn doonta kooxda Blues wixii ka bilowda xilli ciyaareedka soo socda ee 2017-18, iyada oo heshiiska ay haatan kula jiraan shirkadda Jarmalka ee Adidas ay soo afmeerayaan dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Go’aanka ay Chelsea ku gaadhay inay ku kala tagaan shirkadda Adidas 6 sanno ka hor inta aanu qandaraaskoodu dhammaanin ayaa keeni doonta inay shirkadda Jarmalka siiyaan 40 million ginni oo magdhow ah, laakiin heshiiska Nike ayaa u qalma inay Chelsea lacagta maga-dhowga ah bixiso.
Heshiiska Chelsea ay la gaadhay Nike waa laba jibaarka inta ay Arsenal ka qaadato shirkadda Puma, waana ka baddan saddex jibaarka inta ay Manchester City ka qaadato Nike, inkasta oo heshiiska City uu dhacayo 2019, isla markaana wada hadalo cusub ay ka geli doonto in lacagta loo kordhiyo.